लागूऔषधसहित समातिएका युट्युबरको अनौठो गाडी, सुत्ने बेडदेखि भान्सा, घुमाउने कुर्सीदेखि कार्यालय सम्म – List Khabar
Home / समाचार / लागूऔषधसहित समातिएका युट्युबरको अनौठो गाडी, सुत्ने बेडदेखि भान्सा, घुमाउने कुर्सीदेखि कार्यालय सम्म
लागूऔषधसहित समातिएका युट्युबरको अनौठो गाडी, सुत्ने बेडदेखि भान्सा, घुमाउने कुर्सीदेखि कार्यालय सम्म
admin February 5, 2022 समाचार Leaveacomment 197 Views
सिन्धुली — झट्ट हेर्दा पुरानो जर्मन ट्रक जस्तो । बायाँ साइडमा दुईवटा ठूला सोलार प्यानल जडित छ । त्यसको चार्ज गर्न ढोकाको साइडमा ठूलो इन्भर्टर राखिएको छ ।जसलाई ताला लगाइएको छ । पछाडि अक्सिजन सिलिण्डर, अगाडि हुटमा त्रिपालले छोपिएको छ ।
बाहिरी बनोट हेर्दा नै यो चानचुने गाडी होइन भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । मोडीफाइ गरेर हाइफाई सुविधासहितको मिनीट्रक यतिखेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको प्राङ्गणमा छ । यो मिनी ट्रक लागूऔषध सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको युट्युबर चेतन कार्कीको हो ।
यो मिनी ट्रकमा सबैखाले सुविधा छ । प्रहरीका अनुसार चालक बस्ने भन्दा पछाडिको भागलाई सुविधा सम्पन्न घर जस्तै बनाइएको छ । बायाँ साइडबाट ढोका खुलेपछि भित्र हेर्दा झन् अनौठो लाग्छ । सुत्ने बेडदेखि भान्साका सबै सामग्री ट्रकमा सेट गरिएको छ । घुमाउने कुर्सीसहित कार्यालय सजावटसमेत गरिएको छ । ट्रकभित्र पनि यस्तो सुविधा हुन्छ भनेर प्रहरी नै अचम्मित भएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रनाउ मनोजकुमार लामाका अनुसार शौचालयसमेत मिनीट्रकभित्रै छ । ‘मिनीट्रक मोडीफाइ गरेर सबैखाले सुविधासहित विलासी सामान राखिएका छन्,’ प्रनाउ लामाले भने, ‘हामीलाई सूचना प्राप्त भएको थियो । नियमित चेकजाँचकै क्रममा गाडीसमेत अनौठो लागेर थप अनुसन्धान गरियो । लागूऔषध फेला पर्‍यो ।’
संगीतका लागि गितारदेखि खाने काजु किसमिससमेत सबै मिनीट्रक भित्र पाइएको उनले बताए । विदेसतिर यस्तो ट्रकलाई क्याम्पट भनिने उनले सुनाए । चल्तीका युट्यूबर भएकाले लागूऔषधसहित समाइएका कार्कीलाई खुर्कोटमा नै फ्यानहरूले घेरेको समेत प्रहरीले जनाएको छ ।
बीपी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका ७ को खुर्कोटमा लागूऔषध सहित काठमाडौं महानगरपालिका २६ सामाखुसीका ३७ वर्षीय युट्यूबर कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बर्दिबासबाट धुलीखेलतर्फ जाँदै गरेका युटु्यूबर कार्कीले चलाएको चेतनभ्लग आवरणको ०१–००३क ९१८२ नं को मिनीट्रक चेकजाँच गर्दा कार्कीले लगाएको ट्र्याकसुटको दाहिने खल्तीबाट खैरो हेरोइन ४ दशमलव १३० ग्राम र ६ दशमलव ९३० ग्राम गाँजा बरामद भएको प्रहरी प्रनाउ लामाले जानकारी दिए ।
लागूऔषध मुद्दामा युट्यूबर कार्कीलाई शुक्रबार सिन्धुली अदालतबाट ७ दिनको म्याद थपी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रनाउ लामाले बताए । मिनीट्रकको कागजात र मोडीफाइ गर्ने इजाजत भए नभएको समेत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । युट्युबरको आवरणमा लागूऔषध, सुन र अन्य तस्करीका कारोबार बीपी राजमार्गलाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएर बाक्लै भइरहेको सूचना प्राप्त गरेकाले थप कडाई गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
Previous हत्या गर्न घर नै लिए ३० हजार भाडामा, गाडेपछि माथिबाट गरे ढलान
Next किन आउँछ श्वासबाट दुर्गन्ध ? नआउन के गर्ने ? यस्तो छ तरिका सबैले जानीराखौं